HOOHAA! OHERE ADỊGHỊ N’OBI GỌỌMENTI ENUGWU – Bishọp Chukwuma – hoo!haa!!
Bishọp ukwu ndi ụka Nglịkan na-ahụkọta dayọsis ndi dị na mpaghara Enugwu, bụ Dọkịnta Imanuel Chukwuma agwala onye jigodu ọkwa onye isi ala bụ Ọkammụta Yemi Osinbanjọ na ohere adịghị n’obi gọọmenti nke steeti Enugwu. Bishọp Chukwuma kwuru nke a ụnyahụ bụ Satọdee.
Ọ sịrị na afọ juru ndi steeti Enugwu maka ọchịchị bụ ịgba nke Ifeanyị Ugwuanyị na-achị ha. Ọ sị na Ugwuanyị bụ onye ọchịchị na-adịghị agba oke.
Mgbe ọ na-ekwu okwu n’emume nzukọ nke ụmụ akwụkwọ ụka ha na-eme otu ugbo n’afọ abụa, akpọrọ “Nationanal Biennial Conference of the Student Christian Movement (SCM) of Nigeria” n’Enugwu, bishọp Chukwuma toro Ugwuanyị ka o si elekọta ndi steeti Enugwu anya, ọkachakwa ụmụaka ndi a.
Ọ sịrị na-ikwu eziokwu, “steeti Enugwu dị n’aka Chineke” ọ gara n’ihu kwue na Ugwuanyị bụ onye ọchịchị anaghị akpa oke, n’ihi nke a, ọ sị na ohere adịghị n’obi gọọmenti steeti Enugwu.
Bishọp Chukwuma sịrị na ezigbo mmekọrịta dị n’etiti Ugwuanyị na ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndi ọzọ bụ maka na Ugwuanyị na-akwanyere onye ọbụla ugwu nke chere onye. Ọ rụtụrụ aka n’ebe ọ dị ukwuu, na Ugwuanyị na-akwanyere ndi okenye ugwu chere ha.
Chkwuma kenere Chineke n’ebe ọ dị ukwuu ka O si mee ka ha nwee nzukọ ụmụ akwụkwọ a n’Enugwu n’udo. Isiokwu nzukọ a bụ “Obosara Ụzọ nke Adịm Asọ”
O toro Osinbanjo maka ịbịa nonye ma gwakwa ụmụ ntorọbịa okwu dịka o si gbasata adịm asọ. Ọ sị na Osinbanjọ mere nke a, na-agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ọrụ ndi ọzọ ga.
Bishọp Chukwuma sịrị na onye jigodu ọkwa onye isiala a mere nke a n’ihi nnukwu ihụnanya o nwere n’ebe otu SCM nọ. Ọ sịkwa na SCM bụ otu ewubere maka ikwalite ndụ nke mụọ ụmụ na-eto eto, iji mee ka ha too ma bụrụ ezigbo ụmụ amaala n’ọdị n’ihu.
Mgbe ọ na-ekwu okwu, nwoke a jigodu okwa onye isiala gwara ụmụ ntorọbịa ahụ ka ha bụrụ ezigbo ndi na-adị njikere ịlabata ọchịchị nakwa ihe nhịa ahụ ya na ya so. Ọ kọwara ụmụ ntorọbịa dịka ndi okwu ha kachaa ada ụda n’ala anyị. Ọ gwara ha ka ha hụta onwe ha dịka ndi ochịchị nke taata, ọ bụghị nke echi dịka esi ekwubu.
Osibanjọ kwuru na ekewaa ọnụ ọgụgụ ala anyị ụzọ nnarị, na ụzọ iri isii bụ ụmụ na-eto eto…
Mgbe onye ọchịchị steeti Enugwu bụ Ugwuanyị na-alabata onye jigodu okwa ọnye isi ala na ndi ọzọ welitere isi bịara mmemme a, o kenere ndi isi otu SCM maka inwe nzukọ a n’Enugwu. O kwuru na nke a gosiri n’eziokwu eziokwu, na steeti Enugwu dị n’aka Chineke.
Previous Post: NDI UWE OJII ANWỤCHIELA MMADỤ ATỌ JI “ENYEM-AKA” EZU N’ENUGWU
Next Post: ỌRỤ UGBO